နိုင်ငံအပေါ်သစ္စာစောင့်သိတဲ့ မိခင်ကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ဆုံးမစကား မျက်ရည်တောင်ဝဲတယ်ကွယ် ______________________________________________ ငါ၏သမီး အမေ့သမီး.. ဆရာဝန်မကြီးရေ… သမီးကိုပေးတဲ့ဆရာဝန်ဘွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်က ပေးတာ. နိုင်ငံတော်ကို ပြန်ကျေးဇူးဆပ်လို့ နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းတယောက်ဖြစ်စေပါ ပုဂ္ဂိုလ် တဦးတယောက် အများ ပယောဂကြောင့်တော့ နိုင်ငံတော်အပေါ် သစ္စာမဖောက်လေနဲ့ အမေဟာ.. သမီးအတွက် သူများ ဆရာဝန် သူငယ်ချင်းတွေလို ပြည့်စုံ ချမ်းသာအောင်တွန်းတင် စင်မခံပေးနိုင်ပေမယ့်… နိုင်ငံရဲ့ ပြန်လည်ပြုပြင်တည်ဆောက်မှု အကြတ်အတည်းမှာ..…
ဂငျးနဈစံခြိနျဝငျနိုငျလောကျတဲ့ သီလအရမျးကောငျးတဲ့အသကျအရှညျဆုံးမွနျမာနိုငျငံသားအဖိုးအို ဂငြးနဈစံခွိနဝြငနြိုငလြောကတြဲ့ သီလအရမြးကောငြးတဲ့အသကအြရှညဆြုံးမှနမြာနိုငငြံသားအဖိုးအို အသကွ ၁၂၃နှဈပှညွ့သှားပှီဖှဈတဲ့ ကခငှပွှညနွယွ ခေါငလွံဖူးမှို့နယွ ဖမတွုံရှာမှဦးဆမဘွုံဒီး ကခငှပွှညနွယခွေါငလွံဖူးမှို့နယွ ဖမတွုံရှာမှ မှတပွုံတငအွမှတွ ၁/ခဖဒ(နိုငွ)၀၀၈၉၁၁ ကိုငဆွောငသွော ရဝမလွူမှိူး ဦးဆမဘွုံဒီး၏ အိမထွောငစွု၌ ဖောပွှခကှအွရ ၎င်းငျးငြးငွး၏ မှေးသကကြရာဇမွှာ(၁၃.၆.၁၈၉၇)ဖှဈပှီးယခုလာမညွ့ ဇှနလွ ၁၃ရကနွတှေ့ငအွသကွ ၁၂၃နှဈပှညွ့ခဲ့ပှီဖှဈသညွ။ ဦးဆမဘွုံဒီးသညွ ဖှဈပကှခွဲ့သော အတိတသွမိုငွးမှားကို ပှနလွညပွှောပှနိုငပွှီး ငယရွှယစွဉအွခါက ပူတာအိုမှို့ သို့ တဈကှိမရွောကဖွူးကှောငွးကှမွး ဆေးလိပွ အရကွ သောကသွုံးခှငွးမရှိကှောငွးလညွးသိရသညွ။ လကရြှိအခွိနြ ကမျဘာ့ဂရငြးနဈမှတတြမြးတှငြ ကမျဘာ့အသကကြှီဆုံး အမွိုးသား မှာ အသကြ ၁၁၂ နှဈ အရှယအြဈစရေးလူမွိူး Yisrael Kristal ဖှဈပှီးသူ၏ မှေးသကျကရာဇမြှာ စကတြငဘြာလ ၁၅ ရကနြေ့ ၁၉၀၃ ဖှဈသညြ။ကမျဘာ့အသကအြကှီးဆုံး ဂငြးနဈစံခွိနတြငနြိုငဖြို့ ပရိသတကြှီး ရှဲပှီးမွှဝပေေးကှပါ Crd
ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး ပတ်တမွား စတေီကို ဘားအံမွို့မှာ တညျထား ကိုးကှယျမညျ ဘားအံမှို့တှငွ ကမဘြာ့ပထမဆုံးစူဠာမဏိပတတြမှားစတေီကို ကပှသွိနွးသုံးသောငွးကှွော အကုနအွကခှံ၍ တညွ ထားကိုးကှယမွညွ ကမဘြာပေါတွှငွ ပထမဆုံးဖှဈလာမညွ့ စူဠာမဏိပတတြမှားစတေီကို ကပှသွိနွးသုံးသောငွးကှွော အကုနအွကခှံကာ ကရငပွှညနွယွ ဘားအံမှို့နယအွတှငွးတညထွားကိုးကှယမွညဖွှဈကှောငွး ကမဘြာလုံးကှောငွးတိုကွ အနနတြမတတြောအခမဲ့ဆေးခနွးနာယကဆရာတွော ဦးဝါသဌကေ မိနွ့ကှားပါတယွ။ အဆိုပါ စတေီသညွ ဉာဏတွောအွမှငွ့ ၁၈ ပေ ခှဲရှိမညဖွှဈပှီး ဘားအံမှို့…
နေခြည်ကတော့ ဒရမ်မာချိုးလိုက်ပြန်ပြီ ကျွန်မသည် စစ်တပ်မိသားစု background မှ ကြီးပြင်းလာသူဖြစ်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယခုပြည်သူ့ဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုသည့် နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုတွင် ပါဝင်ပတ်သတ် ထောက်ခံမှုပြုသော မည်သူတဦးတယောက်ကိုမဆို ဆန့်ကျင်ရှုံ့ချပါသည်။ -ကျွန်မ သည်နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ရပိုင်ခွင့်ဖြင့်မဲပေးထားသော ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မျှမျှတတ ဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့သောမိမိတို့ ခေါင်းဆောင်နှင့်အစိုးရအဖွဲ့ကိုသာ လက်ခံပါမည်။ -ကျွန်မသည် အစိုးရဝန်ထမ်းတဦးမဟုတ်သော်လည်း Civil Disobedience ပြုလုပ်၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသော…
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်မွေးနေ့ အတွက် အထူးနိဗ္ဗာန်ကူးတို့အလှူတော် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးကျော်သူ
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်မွေးနေ့ အတွက် အထူးနိဗ္ဗာန်ကူးတို့အလှူတော် ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးကျော်သူ မငွးသားကှီး ဦးကှောသွူက ကပရိသတတွှရေဲ့ အားပေးခစှခွငမွှုတှကေို အပှညွ့ အဝရရှိထား ပှီးအောငမွှငနွတေဲ့ အနုပညာရှငတွဈယောကပွဲ ဖှဈပါတယွ။ ယနအေ့ခှိနအွထိ ပရိသတတွှရေဲ့ အခစှတွှကေို ရရှိနတေုနွးပဲ ဖှဈပှီး အနုပညာ အလုပတွှကေိုလညွး အနညွး အကဉွှးမှသာ လုပကွိုငနွတော တှရေ့ပါတယွ။ ဒါ့အပှငွ လူမှုရေးအကှိုးပှု ပရဟိတလုပငွနွးကိုလညွး ဦးဆောငပွှီး…
နောက်နေ့တွေမှာလည်း ဆေးရုံသွားပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဦးမှာပါ….
နောက်နေ့တွေမှာလည်း ဆေးရုံသွားပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဦးမှာပါ…. ကျနော်က လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဆေးရုံအုပ်ကြီး တစ်ဦးပါ။ နောက်နေ့တွေမှာလည်း ဆေးရုံသွားပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်နေဦးမှာပါ။ အဲဒီလိုတာဝန်ထမ်းဆောင်တာဟာ အခုအာဏာသိမ်းအဖွဲ့ရဲ့အစိုးရသစ်အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ရဲ့ပြည်သူ/လူနာတွေ အားကိုးရာမဲ့နေတဲ့အခြေအနေမဖြစ်အောင် သွားရောက်စောင့်ရှောက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်အတွက်တော့ လူထုကရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရကသာ အတည်ဖြစ်ပြီး ကျနော်တို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့စကားအတိုင်း တည်ငြိမ်စွာလိုက်နာပါမယ်။ ဆေးရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေပေမယ့် လက်နက်နဲ့အနိုင်အထက်ပြုတာကို လက်မခံကြောင်းပြသတဲ့အနေနဲ့ ကျနော်တို့ရဲ့ အင်္ကျီ/ဝတ်စုံ/ဂျူတီကုတ်တွေမှာ အနီရောင်ဖဲကြိုးလေးတွေ တတ်ထားပါမယ်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သား အများစု…